I-RoboVac X80 ne-HomeVac H30, kubhejwa izifiso ezintsha kusuka ku-eufy | Izindaba zegajethi
UMiguel Hernandez | 08/09/2021 17:03 | General, Izaziso
Umkhiqizo onguchwepheshe wokuzenzakalela kwasekhaya nezinketho ze-eufy yasekhaya enqume ukubheja ngokungena ngokugcwele emakethe ye-vacuum ngenketho I-RoboVac X80 abakubiza ngokuthi i-vacuum vacuum esithuthuke kakhulu emakethe, kanye ne-vacuum vacuum yabo ephathwa ngesandla IkhayaVac H30, sizobazi ngokujula ngemininingwane yabo nezici zabo ezintsha.
1 I-RoboVac X80
2 IkhayaVac H30
I-RoboVac X80 yiyona yokuhlanza i-robot yokuqala emhlabeni ukufaka ubuchwepheshe obunemishini emibili
i-turbine, okuyi Inikeza ama-motor amabili we-2Pa wamandla okudonsa. Lokhu kwandisa kakhulu ingcindezi enamandla yerobhothi, ukwazi ukuthuthukisa ukuqoqwa kwezinwele ezifuywayo ngama-57,6% * ngasikhathi sinye isikhathi esichithwe kahle ukuhlanza futhi kusebenza ngokudlula okukodwa. Nge-RoboVac X80 Hybrid, ukuhlanzwa okujulile kungenzeka ngomsebenzi wayo ombaxambili wokuhlanza nokugwaza ngasikhathi sinye. Izinga lokusetshenziswa kwethangi lokungcola lenyuke ngo-127% *, lifinyelela
amandla afinyelela ku-600ml.
*> Imininingwane enikezwa ngumkhiqizo
Ngokubambisana, i-iPath laser navigation kanye nobuchwepheshe bemephu ehlakaniphile enikwe amandla yi
I-Artificial Intelligence (i-AI Map 2.0) yakha imephu enembile yendlu esiza irobhothi ukubala a
inqubo yokuhlanza esebenza kahle ngaphandle kokukhohlwa noma iyiphi ikhona.
Okwesibili kwezinto ezintsha u-eufy azethule namuhla i-HomeVac H30 vacuum cleaner,
enikeza ukwenza izinto ezihlukahlukene usuku nosuku. Ngohlelo lwayo lwe-TriPower TM olunamandla amakhulu wokudonsa,
kulula ukugcina indawo ihlanzekile, iphilile futhi ayinazo zonke izinhlobo zomzimba. Umklamo wakhe
icwecwe futhi ayisindi, nje 808 amagremu wesisindo, kukwenza kube lula ukusebenzisa isikhathi eside
yesikhathi ngenkathi ugcina isikhala sethangi lokungcola le- 250ml okubandakanya i-
ubuchwepheshe bokususa uthuli ukususa izinwele zokuhlunga kalula.
Ngokuya ngephakheji elikhethiwe, i-HomeVac H30 ingafaka izesekeli zokuhlanza imoto, a
ibhulashi enezimoto elenza lula ukuhlanzwa kwezinwele zezilwane, naku Infinity ikhithi, ibhulashi le
izitezi eziqinile ezikwazi ukukhipha nokususa iphasi elilodwa.
Izinhlobo ezintsha zizotholakala ukuze zithengwe eSpain ekupheleni kukaSepthemba ngo-
Ama-Amazon. Umndeni weRoboVac X80 uqala ngo- € 499,99 kanti imodeli yeX80 Hybrid izobiza i- € 549,99.
I-HomeVac H30 inenani lokuqala elingu- € 159,99, elihluka kuye ngohlobo nezesekeli
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-RoboVac X80 ne-HomeVac H30, kubhejwa izifiso ezintsha kusuka ku-eufy